Injineer Meelaha Colaadaha Ugu Daran Ee Dunida U Safra Oo Lug Ku Maraya Afrika | Hawraar
Injineer Meelaha Colaadaha Ugu Daran Ee Dunida U Safra Oo Lug Ku Maraya Afrika
Nin u dhashay dalka Jaban oo lagu magacaabo, Masahito Yoshida, ahna injineer gaadiidka ku takhakhusay, ayaa socod lug ah ka bilaabay qaarada Afrika, waxaanu socodkiisa oo 11-kun oo km, qaadan doona uu ka soo bilaabay dalka Masar, caasimaddiisa Qaahira, isaga oo doonaya in cidhifka koonfureed ee qaarada uu ku gaadho, halkaas oo ah magaalada Cape town ee dalka Koonfur Afrika.
Masahito Yoshida, oo sadex iyo sodon jir ah, waxa uu hore safar lug ah ugu soo maray, waddamada Ciraaq, Suuriya iyo meelo kale oo xaaladooda ammaan iyo ta nololeedba halis badan tahay, kuwaas oo dawlada dalkiisu uga digtay, laakiin uu ka dhego adaygay.
Sida wararku sheegayaan, Eng. Yoshida, ayaa shanti bishii sagaalaad ee aynu ka soo gudubnay, waxa uu soo gaadhay, Magaalada Alexandria ee dalka Masar, halkaas oo uu isagoo Markab dalkiisa ka yimi la socda uu ka soo degay, ka dibna waxa uu bilaabay socodkiisi lugta ahaa, kaas oo uu kaga soo gudbay, ilaa uu sadex cisho ka dib ku soo gaadhay Magaalada Qaahira ee caasimadda u ah dalka Masar.
Muuqaalka sawirkan ayaa lagaga qaaday, wakhti uu bishii hore badhtamaheedi lug ku dhex qaadayay, saxaraha waqooyi ee Magaalada Qaahira, waxaanu shan iyo toban cisho ka dib soo gaadhay, magaalada xuduuda Masar iyo Suudaan ku taala ee Ras Gharib.
Markii uu ka talaabay xadka labada waddan ee Suudan iyo Masar u dhexeeya ayuu warbaahinta u sheegay, in socod dheer oo 11-kun oo km ahi u bilaabmayo, kaas oo cidhifka koonfureed ee qaarada ku gaadhi doono, isaga oo sida uu sheegay sii dhex mari doona, meelo dagaalo ka jiraan, dhul xayawaano dad qaad ahi ku nool yihiiin iyo meelo lama degaan ah oo halis badan leh, laakiin uu isagu u babac dhigayo oo ay ka go’an tahay inuu kaga dhabbeeyo go’aankiisa.
Ninkan ayaa aad u amaanay dadka aaminsan diinta Islaamka, kuwaas oo uu tilmaamay inay yihiin, dad wanaagsan oo marti soorka iyo soo dhawaynta aad ugu fiican, waxaanu xusay inuu meelo badan ka sheegay, qoraalo badana ka sameeyay, kuwaas oo uu reer galbeedka si wayn ugu dhaliilay beenta iyo sawirada xun ee ay Islaamka ka baahinayaan.
Ninkan ayaa gabi ahaanba dhaar ka maray inuu raaco wax gaadhi ah, xitaa haddii laga codsado in laga taageero socodkiisa, waxaanu sheegay inuu seexdo hadba meesha gabal ugu dhaco, isaga oo riixanaya gaadhi gacan yar oo alaabtiisu u saaran tahay, waxaanu tilmaamay in marba meesha uu degayo uu ka dhisto Teendho yar oo uu sito, halkaasna wax ku karsado.
Mar uu ka hadlayay socdaalkiisa waxa uu sheegay in maalin walba uu socdo masaafo dhan konton km, sidaa awgeed aanu dhibsan oo si fiican uu ula qabsaday, laakiin kaliya waxa dhibaa ay tahay, kulaylka qoraxda oo mararka qaarkood talax gab ka dhiga.
Muu sheegin ninkani ujeedada socdaalada noocan ah uu ugu kaco iyo sababta uu halista u gelinayo naftiisa, waxaanu mar la waydiiyay uu kaga jawaabay inuu jecel yahay barasahda dhaqamada iyo dabeecada dhulka, sidaa awgeed ay u tahay oo kaliya Hiwaayad iyo wax uu xiiseeyo.